အရည်အချင်း - ဟန်ကျိုး Fuji အဆောက်အဦးအပြင်ထုတ်ကုန်များ Inc က,
နေအိမ် » အရည်အချင်း
ကျနော်တို့အတွက် reply ပါလိမ့်မယ် 24 နာရီ!
Fuji သောမူရင်းဝယ်ယူမှရမ်း Fuji ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ချို့ယွင်းချက်မှအခမဲ့များမှာ တစ်ဦးကာလအတွက်သို့မဟုတ်လက်ရာ တစ်နှစ် ဝယ်ယူမှုသည့် နေ့မှစ.. Fuji တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ ABပုံမှန် wear နဲ့မျက်ရည်, ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကျရှုံးမှုအတွက်,အလွဲသုံးစားမှု, alteration,ပွောငျးလှဲခွငျး, အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်မလျော်ကန်သောစောင့်ရှောက်မှု.
ဒီကန့်သတ်အာမခံ၏စည်းကမ်းချက်များထက်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိသည်အခြား express ကိုအာမခံရှိပါတယ်. အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်အတွက်ရကြမည် တစ်ဦးNY အာမခံဓိပ်ပာ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ကုန်သည်များနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအပါအဝင်, ကျော်လွန်တိုးချဲ့ အဆိုပါအမြန်အာမခံ၏ကြာချိန်ဤနေရာတွင်ပါရှိသော. အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်အတွက်ရကြမည် Fuji ဖွစျပှားများအတွက်ထိုက်ဖြစ် သို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု daမာဂုပညာရှိ.
အချို့နိုင်ငံများတွင်တစ်ခုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအပေါ်ကန့်သတ်မှုသို့မဟုတ်များ၏ဖယ်ခွင့်မပြုပါဘူး ကန့်သတ်- ation ဖွစျပှားသို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ, ဒါကြောင့်အထက်ပါကန့်သတ်သို့မဟုတ်ချန်လှပ်လျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ သို့ သငျသညျ.ဤသည်အာမခံသငျသညျတိကျသောအခွင့်အရေးများပေးသငျတို့သတိုင်းပြည်ကနေကွဲပြားသောအခြားအခွင့်အရေးများရှိစေခြင်းငှါ သို့ ပြည်.